मार्च 31, 2010 मा 11:53 को मा
हाय, हामी हाम्रो साइटमा प्लगइन प्रयोग र परिणाम मा धेरै खुसी छौं. तर हामी हाम्रो आगंतुकों स्कट्स भाषा र सोच साइट अनुवाद र हेर्न मौका प्रदान गर्न भने यो सम्भव छ र अतिरिक्त भाषा थप्दा मा कठिनाई के हो चाहनुहुन्छ?
कुनै पनि मद्दत / प्रतिक्रिया सबैभन्दा सराहना. Thanks for the great plugin 🙂
मार्च 31, 2010 मा 1:40 साँझ
तपाईंले भर्खरै अचल फाइल मा भाषा एरे गर्न एक लाइन थप्न आवश्यक, भाग्यले साथ दिओस्
जुन 18, 2010 मा 3:38 साँझ
जानकारी को लागि धन्यवाद र लेट उत्तर को लागि माफ गर्नुहोस्.
म यसलाई एक गोमा दिन र तपाईंलाई थाहा कसरी म पायो दिनेछौँ. धन्यवाद फेरि, still an excellent plugin 😉
अप्रिल 1, 2010 मा 4:36 साँझ
Very good 🙂 One more function, तपाईं शीर्षक मा थप्न सक्नुहुन्छ, भाषा केही identifers… मलाई थाहा छैन… किनभने Google यो सन्देश देखाउन webmastertools:
हराएको शीर्षक ट्याग 0
शीर्षक ट्याग नक्कली 1,139
लामो शीर्षक ट्याग 0
कम शीर्षक ट्याग 0
गैर-सूचनात्मक शीर्षक ट्याग 0
नक्कली शीर्षक ट्याग सानो समस्या छ, but problem 🙂
अप्रिल 16, 2010 मा 6:13 साँझ
प्रशासक मेरो टिप्पणी जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? 🙂
अप्रिल 16, 2010 मा 7:23 साँझ
शीर्षक ट्याग र मेटा ट्याग पनि अनुवाद गर्दै छन्, हुनत फ्रन्टइन्ड इन्टरफेस छैन, यो काम भइरहेको छ. अहिलेको लागी – प्राप्त यो निश्चित छिटो तरिका तपाईं एक पोस्ट मा जहाँसुकै शीर्षक मा प्रयोग पाठ राख्नु हो (पनि एक निजी एक) र अनुवाद इन्जिन यो ठीक गरौं.
अप्रिल 4, 2010 मा 4:54 साँझ
सबै नयाँ संस्करण ठीक काम गरिरहेको छ (v.5).
म उर्दू र पंजाबी लागि अनुवादक सुझाव सक्छ ? म पाकिस्तान उत्तरदाताओं छ र तिनीहरूले ती अनुरोध गर्नुभएको छ. साथै पाकिस्तान भारत केही सबैभन्दा कुरा यी दुई भाषा.
धन्यवाद; राम्रो काम गरीरह्नु!